Amin'ny akanjo hanaovana poncho - vehivavy, mitafy, akanjo, tora-pasika, mafana, fotsy, akanjo, akanjo, fehikibo, akanjo, akanjo, jeans
Amin'ny akanjo hanaovana poncho - ireo fitsipika momba ny fananganana lamaody
Amin'ny akanjo isan-karazany amin'ny akanjon'ny vehivavy, dia miavaka ny akanjo toy ny poncho. Io vokatra io dia manana endrika tena izy, saingy tena mahaliana, ka manintona vehivavy maro. Na izany aza, tsy ny vehivavy lamaody rehetra no mahafantatra izay tokony hatao amin'ny poncho, ary amin'ny zavatra tsara kokoa ny tsy mampifangaro azy.
Amin'ny inona ny manao poncho 2018?
Tamin'ny taona 2018, stylists and designers dia nanolotra karazana varotra mahaliana maro ho an'ny vehivavy tsara tarehy. Marihina fa maro ireo marika no nanisy fiheverana ny famoronana modely poncho tsara tarehy sy mahafinaritra, izay tena mifanentana amin'ny famenoana ny sarin'ny fizaran-taona. Noho izany, anisan'ireo izay mitafy poncho amin'ny taona 2018, dia mampiavaka ny fampiarahana manaraka:
kiraro fohy , pataloha kiraro ary kiraro malefaka. Ity fomba fijery ity dia tokony ampitomboina amin'ny kiraro avo lenta, izay hanasongadina ny maha-vehivavy sy ny hakanton'ilay vehivavy tsara tarehy, ary ny fitaovana amin'ny palette ny volon'ny fararano. Ny safidy tsara indrindra dia ny fehikibo vita amin'ny fehikibo ary ny mofomamy misy volom-borona, mainty manga na lalina manga;
pataloha na jeans, kiraro ankapobeny amin'ny kofehy matevina sy lavaka ary satroka kiraro. Ity kitapo isanandro ity dia hijery tsara miaraka amin'ny poncho marevaka sy akanjo telo dimanjato vita amin'ny hoditra marina;
leggings hoditra, kiraro fantsom-paty miaraka amin'ny bootleg avo ary karazana lolo matevina sy manga vita amin'ny kodiarana. Io no iray amin'ireo tsikombakomba izay ahafahanao mitafy poncho amin'ny fahavaratra sy ny ririnina. Noho izany, mandritra ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana dia azo ampiasaina amin'ny vokatra vita amin'ny totozy ity kitay ity, ary amin'ny ririnina - akanjo mafana vita amin'ny hoditra voajanahary;
Ny modely lava amin'ny akanjo-poncho vita amin'ny kiraro dia tena mahaliana sy tena izy, noho izany dia tsy tokony ampiana amin'ny zavatra hafa ao amin'ny garderobe. Amin'ny taona 2018, ny akanjo lava poncho dia ho lasa iray amin'ireo fironana lehibe indrindra amin'ny vanim-potoana, ka noho izany dia azo jerena na aiza na aiza ny sary amin'ny lamaody;
Ankoatra izany, amin'ny vanim-potoana mafana amin'ny vanim-potoana ho avy eo eny an-dalambe ao an-tanàna dia afaka mihaona ireo karazana fahavaratra mandritra ny fahavaratra amin'ity gara ity. Anisan'izany ny fanaovana akanjo poncho amin'ny fitaovana maingoka - pataloha henjana sy henjana, skirt mini, ary jeans mahazatra, fa tsy mavesatra amin'ny endriky ny endriny.
Amin'ny inona ny manao poncho amin'ny lohataona?
Toy ny taom-bolo maro lasa izay, ny Poncho 2018 dia afaka miditra sary marobe maromaro natokana ho an'ny off-season. Ny modely maoderin'ity akanjo ity dia tena mahagaga, vehivavy ary kanto, ka azo ampifandraisina amin'ny zavatra samihafa, kiraro ary fitaovana. Noho izany, amin'ny lohataonan'ny 2018, ny ankamaroan'ny ankizivavy dia hisafidy ireto fitambarana manaraka ireto:
jeans-manty na mifangaro miaraka amin'ny T-shirt, sodina, kofehy malefaka na lobaka. Amin'ny sokajy toy izany dia afaka manangona kiraro karazam-barotra isan-karazany ianao - kiraro - kiraro, kiraro ankapobeny amin'ny kiraro na kiraro, kiraro avo be, kapa eny amin'ny lampihazo ary ny maro hafa;
Ny pataloha narevaka izay azo fongana na manana loko mahazatra, lobaka na akanjo marevaka sy votsy vita amin'ny hoditra marina. Raha toa ka ilaina ny firaisana ho an'ity zazavavy ity mba hamoronana sarim-piankohofana henjana, dia tsy maintsy misafidy ny loko manga sy fotsy mainty na mainty ianao. Ao amin'ny look'ah everyday dia afaka manandrana amim-pahavitrihana amin'ny loko marevaka ianao - amin'ny zavatra tokony hikorontana poncho, maitso, burgundy, mena, volombava ary pataloha hafa. Ny blous amin'ny tranga rehetra dia tokony hijanona ho laconic araka izay azo atao;
Jereo tsara amin'ny zavatra poncho ao amin'ny poketran'ny tena hoditra - pataloha sy skirt-kiraro-pensily. Ny tongotra amin'io toe-javatra io dia tokony misy kiraro na kiraro amin'ny kiraro avo;
Farany, amin'ny fotoana amin'ny lohataona dia afaka mitondra akanjo ny ponchos, indrindra amin'ny angady na angady. Ho an'ny modely midi-sy maxi-lamandy, dia soso-kevitra ny hisafidy kiraro ankolaka na halaka-boots eo amin'ny voditongotra, ary ho an'ny miniskirts - kiraro, manidy lohalika.
Amin'ny inona ny manao poncho amin'ny fahavaratra?
Ny modelim-pandehanana an-tsokosoko amin'ity vokatra ity dia saika manolo foana ny pataloha, ny jaky na ny pataloha, noho izany dia tokony hosoloina an-tendron'ireo akanjo marevaka, akanjo, t-shirts na tonta sy turtles tsotra. Ny fonosin'io sary io dia tokony hamehezana sy hamafisina - pataloha tsotra tsotra na jeans malaza.
Ankoatra izany, matetika ny ankizivavy sy ny vehivavy dia manontany tena ny amin'ny tokony hanaovana akanjo poncho amin'ny andro fahavaratra mangatsiaka. Tena sarotra ny mampifanaraka ny endriky ny fashionista maoderina, satria manampy betsaka izany ary mahasarika ny saina foana. Ny tsara indrindra, ity vokatra ity dia mitafy akanjo marevaka sy midi-jirofo, jeans henjana ary kiraro avo loha.
Amin'ny inona ny manao poncho amin'ny fahalavoana?
Amin'ny fararano dia misy safidy farafahakeliny maro, izay ahafahanao manao pongo ho an'ny mandeha, ny daty mahafinaritra na ny fivoriana mahafinaritra. Mandritra ity vanim-potoana ity, ny mpilalao stylist dia voatery hametraka vokatra mafana, izay mety ho lasa fitaovana amin'ny akanjo mahazatra. Noho izany, ny poncho mafana dia mijery tsara ny akanjon'ny vehivavy:
Hatsikana sy jeans-manga;
skirt-tulip na pensilihazo;
Akanjo maingoka vita amin'ny jaky matevina.
Amin'ny inona ny manao poncho amin'ny ririnina?
Ny fanontaniana mikasika ny zavatra tokony hatao ny poncho amin'ny ririnina, dia matetika koa dia mampanahy ny lamaody, izay maniry amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona hijerena "miaraka amin'ny fanjaitra". Modely ho an'ny ririnina matetika dia manana felam-patana na vita amin'ny hoditra voajanahary na artifisialy, izay mahatonga azy ireo ho maivana sy mahavariana. Izany no mahatonga ny poncho mafana tsara indrindra ho an'ny vehivavy miaraka amin'ny akanjo marevaka, ny ankamaroany ny halavany, ary ny tena ilaina - kiraro avo loha.
Inona no tokony hatao?
Vao haingana, eo anivon'ireo mpamaky trano, dia matetika ianao no mahita ny tora-pasika voalohany poncho mitondra akanjo mandro. Raha ny fitsipika, ity zavatra ity dia nofinidin'ireo tovovavy be herim-po sy feno toky, izay mila mijanona foana. Ny sary amin'ny moron-dranomasina eo anelanelan'io vokatra io dia marevaka foana, fa amin'ny fanehoana bebe kokoa dia azo ampitaina amin'ny satroka boribory sy kapa mihaja eo amin'ny tendron'ny kely.
Sary nalaina tamin'ny poncho
Mba hamoronana sary marevaka, mamiratra ary manintona mifototra amin'io singa io, dia mila mahafantatra ny fomba tsara mitondra ny poncho ianao. Noho izany dia zava-dehibe ho an'ny ankizivavy sy ny vehivavy ny hahatakatra fa ity vokatra ity dia ny lantona lehibe indrindra amin'ny endrika lamaody, ary tsy voatery ny hampifangaro azy amin'ny zavatra hafa mahasarika. Ankoatr'izany, ny modely poncho dia manampy amin'ny habetsan'ny vatany ambony, noho izany dia tsy maintsy mandanjalanja amin'ny fanatrarana ny ampahany marina.
Poncho miaraka amin'ny akanjo
Miorina amin'ny karazana loko sy loko samihafa, azonao atao ny mamorona sary marevaka, sarobidy sy malefaka amin'ny toe-javatra rehetra. Noho izany, ny vehivavy miasa ho toy ny fitambarana - poncho fotsy sy pensilihady mainty vita amin'ny hoditra tena izy. Ao amin'ny fiainana andavanandro, afaka manao akanjo poncho marevaka miaraka amin'ny printy laconic sy denim-jiron'ny taona manga ny manga ny manga avy amin'ny dantelina goavambe. Ho an'ny kiraro, ity hatsembohana ity no tsara indrindra haka kiraro kiraro na kiraro amin'ny fehiloha lavalava.
Poncho miaraka amin'ny jeans
Ny poncho tsara tarehy sy mamirapiratra dia mijery tsara amin'ny mofomamy marevaka amin'ny kiraro miaraka amin'ny bootleg avo, na jeans miaraka amin'ny felatanana tsy dia lavitra loatra amin'ny lohalika. Amin'io tranga farany io, tokony halefa amin'ny kiraro ambany ny kiraro - kiraro, kiraro kiraro na kiraro. Ny poncho modely amin'ny akanjo miaraka amin'ny jeans dia tonga lafatra ho an'ny mandeha, mivarotra na fihaonana amin'ny namana amin'ny lohataona mafana na fararano. Raha toa ka tsy tsara loatra ny toetrandro eny an-dalambe, ary misy oram-be tampoka ny orana, ny tsara indrindra dia nomena ny akanjo mafana amin'ny poncho kapa.
Poncho amin'ny akanjo
Mba hamoronana sary maneho vehivavy sy amam-pitiavana, ny akanjo tsara tarehy dia lasa akanjo tsara tarehy, poncho izay toa tsara tarehy. Ny halavan'ny zavatra toy izany dia mety samihafa - hatramin'ny mini hatramin'ny maxi, na izany aza, ny safidy amin'ny akanjo dia miankina betsaka amin'ny safidy io. Noho izany, ny akanjo mini-akanjo fohy miaraka amin'ny ponchos dia azo ampiasaina miaraka amin'ny jackboots, vokatra avo lenta - miaraka amin'ny booty, sy ny maingoka bitika - miaraka amin'ny kiraro fohy na kiraro avo loko.
Ny fonon'ilay akanjo ho an'ny marika miaraka amin'ny poncho dia tsy tokony ho be loatra, satria ny akanjo lava ao amin'ny antokon'olom-borona miaraka amin'ity zavatra ao amin'ny garazy ambony ity dia ho sahiran-tsaina sy sahirana loatra. Toy izany koa ny kiraro sy ny modely amam-bika maro miaraka amin'ny valopy sy drafitra amin'ny faran'ny vokatra. Ny safidy tsara indrindra ahafahana mamorona sary toy izany dia akanjo maingoka iray miaraka amin'ny fanangonana mangina, manasongadina ny fihodinan'ny vehivavy sy ny seductive amin'ny silhouette ny tompony.
Poncho misy fehikibo
Koa satria ity vokatra ity dia manampy ny habetsaky ny tendron'ny silhouette ary mijery loatra sy be vava loatra, tovovavy tanora maro no manampy azy amin'ny fehikibo matevina na mivelatra izay manantitrantitra ny teboka. Ny poncho tsara tarehy amin'ny fehikibo dia tonga lafatra amin'ny famoronana sary vehivavy sy amam-pitiavana ary mifanaraka tanteraka amin'ny akanjo sy akanjo isan-karazany.
Eny, raha ny fehikibo eo amin'ity sehatra ity amin'ny akanjo dia mamerina miaraka amin'ireo fitaovana hafa ampiasaina amin'ny look'e lamaody. Noho izany, ohatra, ny fehikibo vita amin'ny hoditra mainty dia hanao mpivady mahafinaritra amin'ny fonon-tanana vita amin'ny fitaovana iray ihany, ary ny fehikibo lamba dia afaka miara-miaina amin'ny satroka kanto avy amin'ny firavaka sy aloky ny lamba.
Ny tokony hatao amin'ny poncho - kiraro
Ny fifidianana ny kiraro amin'ity lohahevitra amin'ny vehivavy ity dia be dia be. Noho izany, eo amin'ny fiainana andavanandro, ponchos mitongotra na volonondry dia azo ampifandraisina amin'ny kiraro amin'ny kirany na sehatra kely, kiraro amin'ny karazana tokana, kiraro manana kofehy marevaka, botilion marefo sy boots-chelsea.
Amin'ny ririnina sy ny vanim-potoana ny ponchos, ny akanjo izay tokony hafana sy mahazo aina, dia mifanaraka tanteraka amin'ny boot samy hafa. Ny haavon'ny footleg io karazana kiraro io dia miankina mivantana amin'ny pantina voafidy na ny jirobe - pataloha ety sy kiraro fohy dia mifamory miaraka amin'ny kirarony avo, ary pataloha sy pataloha lava - miaraka amina booty.
Amin'ny inona no manao akanjo mena?
Ahoana no hanavahana tononkalo amin'ny sandoka?
Zava-mahadomelina ho an'ny vehivavy
5 sary tsara tarehy indrindra misy akanjo
Boots for jeans
Inona no lokony mifangaro amin'ny mena?
Fomba ahoana no hitafy kapa amin'ny visera mivantana?
Manicure - Summer 2014
Fomba fitsaboana amin'ny tongotra
Tombo-manga amin'ny selulita
Fitsapana ny ra ao amin'ny ankizy - fandikana
Ny anaram-batana ho an'ireo zazalahy ao Chihuahua
Tandindomin-doza sy tsy voafaritra
Ahoana ny famokarana Forshmak?
Ny tsy firaharahan'ny ratra amin'ny vehivavy - ny antony
Nanapa-kevitra i Rihanna fa hifindra any amin'ny olon-tiany
Kofehy cotton 2016
Anarana ho an'ny alika kely - fifantenana ny anaram-bidy tsara indrindra ho an'ny biby fiompy
Ultra rehetra-anisan'izany - inona io?
Olivier Martinez sy Halle Berry
Fanatanjahantena ho an'ny waist